AC Milan oo Laga Badiyay iyo Kooxaha Napoli,Sampdoria,Fiorentina iyo Atalanta oo Guulo Gaaray – Radio Muqdisho
AC Milan oo Laga Badiyay iyo Kooxaha Napoli,Sampdoria,Fiorentina iyo Atalanta oo Guulo Gaaray
Kooxda Lazio ayaa waxaa galabta garoonkeeda Olimpico Stadium 0-1 uga badiyay kooxda Napoli.
Ciyaaryahan Gonzalo Higuain ayaa daqiiqadii 18-aad ee qeybtii hore ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Napoli.
Kooxda Napoli ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 33-dhibcood,halka kooxda Lazio ay u dhaadhacay kaalinta shanaad,iyadoo leh 31-dhibcood.
Kooxda Parma ayaa waxaa garoonkeeda Ennio Tardini 0-2 uga badisay kooxda Sampdoria.
Kooxda Sampdoria ayaa waxaa qeybtii danbe ee ciyaarta labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Gonzalo Bergessio iyo Roberto Soriano.
Kooxda Sampdoria ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta afaraad,waxana ay leedahay 33-dhibcood,halka kooxda Parma ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hoooseya.
Kooxda ChievoVerona ayaa waxaa garoonkeeda Bentegodi 1-2 uga badiyay kooxda Fiorentina.
Kooxda Fiorentina ayaa goolka la hor martay,waxaana qeybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Gonzalo Rodriguez.
Ciyaaryahan Sergio Pellisier ayaa daqiiqadii 72-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda ChievoVerona.
Ciyaaryahan Khouma Babacar ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Fiorentina.
Kooxda Fiorentina ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 30-dhibcood,halka kooxda Parma ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Genoa ayaa garoonkeeda Stadio Luigi Ferraris barbardhac 3-3 ah kula gashay kooxda Sassuolo.
Ciyaaryahan Domenico Berardi ayaa labo kamid ah goolasha oo mid ka mid kamid ah uu rigore ahaa u dhaliyay kooxda Sassuolo,halka goolka sedaxaad uu u dhaliyay ciyaaryahan Simone Missiroli.
Ciyaaryahan Ioannis Fetfatzidis ayaa labo kamid ah goolasha oo mid kamid ah uu rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Genoa,halka goolka sedaxaad uu u dhaliyay ciyaaryahan Iago Falque.
Kooxda Genoa ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 28-dhibcood,halka kooxda Sassuolo ay horyaalka uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 25-dhibcood.
Kooxda AC Milan ayaa waxaa garoonkeeda San Siro 0-1 uga badiyay kooxda Atalanta.
Ciyaaryahan German Denis ayaa qeybtii hore ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Atalanta.
Kooxda AC Milan ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta sideedaad,waxana ay leedahay 26-dhibcood,halka kooxda Atalanta ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 20-dhibcood.
Real Madrid oo Ka Badisay Kooxda Getafe iyo Ronaldo oo rikoor Cusub Dhigay “Sawirro”